Isifo sikashukela ezinganeni nasentsheni > Isifo Sikashukela Sokunqoba!
Isifo sikashukela ezinganeni: izimpawu nezimpawu, ukuxilongwa, ukwelashwa nokuvimbela
Isifo sikashukela ezinganeni: izimpawu nezimpawu, ukuxilongwa, ukwelashwa nokuvimbela Isifo sikashukela ezinganeni nakubantu abasebasha, kanye nokubonakaliswa kwezimpawu nezimpawu zalo kuya ngokuya kusebenza esikhathini sethu. ...
Isifo sikashukela sentsha
Thayipha isifo sikashukela sohlobo lokuthomba eshumini nambili Isikhathi sokuthomba isikhathi esinzima kakhulu empilweni yomuntu. Kulesi sigaba, kwenzeka imicimbi ebalulekile: ukuthomba nokukhula okusebenzayo. ...
Izimpawu zesifo sikashukela ezinsaneni
Izimpawu zesifo sikashukela ezinsaneni, ezinganeni zasenkulisa nakwentsha Okokuqala, sincoma ukuthi ufunde isihloko esikhulu, "Izimpawu zesifo sikashukela." Futhi lapha uzofunda ngokuningana ngokuthi yiziphi izimpawu zesifo sikashukela ezingasolwa enganeni. ...
Thayipha isifo sikashukela 1 ezinganeni
Thayipha isifo sikashukela 1 - yini? Isifo esingathi sína njengesifo sikashukela sohlobo 1 sikhula ngenxa yokwanda okuqhubekayo kwezinga le-glucose egazini, okubangelwa ukukhiqizwa okunganele kwe-insulin ye-hormone. ...